Shir looga tashanayo Dhismaha Maktabadda Oo lagu qabtay Qardho • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Shir looga tashanayo Dhismaha Maktabadda Oo lagu qabtay Qardho
Shir looga tashanayo Dhismaha Maktabadda Oo lagu qabtay Qardho
September 7, 2019 - By: Mohamud Nadif
Ajandaha Shirkaan ayaa ku qotomay sidii loo soo bandhigi lahaa qorshe balaaran oo lagu hagayo dhismaha maktabad Guud oo ay yeelanayso Magalaada Qardho, taas oo qayb-ka noqonaysa kobcinta wax-akhriska iyo kor u qaadidada waacyiga Bulshada.
Gudigga isu xil-saaray hirgelinta maktabada guud ee Qardho ayaa madasha kusoo bandhigay sahan iyo baaris ay wadeen mudo dhawr bilood ah taas oo la xiriirta qiimayn iyo daraasayn ay ku sameeyeen qiimaha ay ku kacayso dhismaha xarunta, naqshadda goobta iyo qaabka loo ururinayo qaaraanka guud ee maktabaddu ay u baahan tahay.
Duqa Degmada Qardho Cabdi Saciid Cismaan oo ka hadlay ugu horayn goobta waxa uu sheegay in dawladu ay ku deeqday dhulka laga dhisayo maktabadda, kaalintoodana ay ka gaysan doonaan, Hay’adaha, Qurba-Joogta, Madaxda Dawlada iyo Dadka kasoo jeedaa Deegaanka ayuu ugu baaqay in ay ka qayb-qaataan fulinta iyo Hirgelinta Mashruucaan.
Qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaashii barnaamijka iyo aqoonyahan ka hadlay madasha waxay ku dhawaaqeen qaaraan ay kaga qaybqaadanayaan Maktabadda, waxay Gudigga gacanta ku haya dhismaha Maktabadda guud ku bogaadiyeen dadaalka iyo juhdiga ay ku bixinayaan hirgelinta mashruucaan.
Gudoomiyaha Gobolka Karkaar Saciid Maxamed Faahiye oo soo xiray kulanka ayaa bulshada ku dhiirigeliyay in maal iyo waqtiba la geliyo dhismaha Maktabaddaas, Guddiga gacanta ku haya maktabadda ayuu kula dardaarmay in ay hawsha halkaas kasii wadaan. ka dawlad ahaana ay qayb-tooda ka gaysan doonaan mashariicda horumarineed ee Gobolka Ka Socda.